Uluhlula njani inethiwekhi yokufikelela kwi-OLT, ONU, ODN, ONT?
Uthungelwano lokufikelela enethiwekhi yinethiwekhi yokufikelela esebenzisa ukukhanya njengesixhobo sokuhambisa, endaweni yeengcingo zobhedu, kwaye isetyenziselwa ukufikelela kwikhaya ngalinye. Inethiwekhi yokufikelela ebonakalayo. Inethiwekhi yokufikelela ngokukuko ngokubanzi inamalungu amathathu: i-terminal ye-OLT yesiphelo, iyunithi yenethiwekhi ye-ONU, i-optica ...
Kuyavela ukuba ukusetyenziswa kweemodyuli zefayibha ezibonakalayo kubanzi kakhulu
Ekuqondeni kwabantu abaninzi, yintoni imodyuli ebonakalayo? Abanye abantu baphendule: ayenziwanga sisixhobo se-elektroniki, ibhodi yePCB kunye nendlu, kodwa yintoni enye eyenzayo? Ngapha koko, ukuchaneka, imodyuli ebonakalayo inamalungu amathathu: izixhobo zombane (TOSA, ROSA, BOSA), ...
Iindidi zesikhulisi sefayibha
Xa umgama wokudlulisa umde kakhulu (ngaphezulu kwe-100 km), isiginali ebonakalayo iya kuba nelahleko enkulu. Kwixesha elidlulileyo, abantu babedla ngokusebenzisa abaphindayo bokunyusa umqondiso wokukhanya. Olu hlobo lwezixhobo lunemiqobo ethile kwizicelo ezenziwayo. Kutshintshwe ngombane we-fiber amplifier ...
Iimodeli zeHuawei ezibonakalayo zemodyuli
Imodyuli yokubonakalayo sisixhobo esibalulekileyo kwinkqubo yonxibelelwano ye-fiber. Iimodyuli ezibonakalayo zeHuawei ziveliswa yiHuawei Technologies Co, Ltd., kwaye indawo yemvelaphi yiShenzhen. I-Huawei Technologies Co, Ltd. ngumboneleli wezisombululo zenethiwekhi zonxibelelwano. Ishishini eliphambili likaHuawei ...
Umahluko phakathi kwe-OLT, i-ONU, i-router kunye nokutshintsha
Okokuqala, i-OLT sisiphelo sendlela yokujonga, kwaye i-ONU iyunithi yenethiwekhi ye-optical (ONU). Zombini zizixhobo zonxibelelwano zothumelo zamehlo. Iimodyuli ezimbini eziyimfuneko kwi-PON: PON (Passive Optical Network: Passive Optical Network). I-PON (uthungelwano lwamehlo olungasebenziyo) luthetha ukuba (...
Ngaba ukhona umahluko phakathi kwe-FTTB kunye ne-FTTH?
1. Izixhobo ezahlukeneyo Xa i-FTTB ifakiwe, izixhobo ze-ONU ziyafuneka; Izixhobo ze-ONT ze-FTTH zifakwe ebhokisini kwinxalenye ethile yesakhiwo, kwaye umatshini ofakiweyo womsebenzisi uqhagamshelwe kwigumbi lomsebenzisi ngokusebenzisa udidi lweentambo ezi-5. 2. Amandla ahlukeneyo afakiweyo e-FTTB yi-fiber optic ...
Hlaziya iimfuno ezine eziphambili zamaziko edatha kwiimodyuli ezibonakalayo
Okwangoku, ukugcwala kweziko ledatha kuyanda ngokubonakalayo, kwaye i-bandwidth yenethiwekhi ihlala iphucula, ezisa amathuba amahle okuphuhliswa kweemodyuli ezinesantya esiphezulu. Makhe ndithethe nawe malunga neemfuno ezine eziphambili zeziko ledatha elizayo ...
Ukukhanya kweLightCounting yokubonelela ngemveliso yecandelo lezonxibelelwano inokwahlulahlulwa kubini
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, i-LightCounting ikhuphe ingxelo yayo yamva nje ngobume beshishini loqhakamshelwano. Iarhente ikholelwa ekubeni ishishini lonxibelelwano lokubonwa kwamehlo linokwahlulwa kubini, kwaye uninzi lwemveliso luya kwenziwa ngaphandle kwe China kunye ne-Unite ...
Imeko yangoku yoShishino: Izixhobo zeNkqubo yokuThuthwa kwe-DWDM yezixhobo
"Ukukhuphisana kakhulu" yindlela efanelekileyo yokubonakalisa i-Optical Transport DWDM yemakethi yezixhobo. Ngelixa intengiso inkulu, inobunzima obuyi- $ 15 yezigidigidi, kukho malunga neenkqubo ezingama-20 zabavelisi abathatha inxaxheba ngokukuko ekuthengiseni izixhobo ze-DWDM kwaye baphikisane ngokuqatha nesabelo sentengiso. Oko kwathiwa, ...
Ukuqwalaselwa kwe-Omdia: Abasebenzisi beenethiwekhi ezincinci zase-Bhritane naseMelika bakhuthaza i-FTTP boom entsha.
Iindaba ngomhla we-13 (Ace) Ingxelo yakutshanje evela kwinkampani yophando kwintengiso u-Omida ibonisa ukuba eminye imizi yase-Bhritane neyaseMelika ziyaxhamla kwiinkonzo ze-broadband ze-FTTP ezibonelelwa ngabasebenzisi abancinci (endaweni yokuba basebenzise i-telecom operators okanye i-cable TV operators). Uninzi lwezi zinto zincinci ...
ICFP / CFP2 / CFP4 Imodyuli ebonakalayo
I-CFP MSA ngumgangatho wokuqala weshishini ukuxhasa i-40 kunye ne-100Gbe Ethernet i-transceivers ebonakalayo. Umgaqo-nkqubo we-CFP wemithombo emininzi yokuchaza kukucacisa ukupakishwa kweemodyuli ezishushu ezinokutshintshwa ukuze kukhuthazwe ii-40 kunye ne-100Gbit / s, kubandakanya nesicelo sesizukulwana esilandelayo esinejubane ...
Umahluko phakathi kweCWDM kunye ne-DWDM
Ngophuhliso oluqhubekayo lweshishini loqhakamshelwano, ubuchwepheshe obutsha kunye nezisombululo zokonga iindleko ziyaqhubeka nokuvela. Umzekelo, iimveliso zeCWDM kunye neDWDM ziya zisetyenziswa ngokubanzi, ke namhlanje siza kufunda ngeemveliso zeCWDM kunye nezeDWDM! I-CWDM yitekhnoloji ye-WDM yokudlulisa ngexabiso eliphantsi ...
I-Sfp C ++, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Ixabiso leHuawei Olt, Imodyuli yeFiber Optical, Umthumeli weXfp, IHuawei Qsfp +,